कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय, बिरामी छन् पर्याप्त औषधि छैन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्णाली प्रदेश ∕ कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय, बिरामी छन् पर्याप्त औषधि छैन
कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय, बिरामी छन् पर्याप्त औषधि छैन
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ भदौ १६ गते, १७:२१ मा प्रकाशित
वीरेन्द्रनगर—वि.सं. २०५० सालमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश औषधालयको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन क्षेत्रीय औषधालयको रुपमा रहेको यो औषधालय तीन सरकारको मातहतमा गइसकेको छ । पहिला संघीय सरकार, त्यसपछि स्थानीय सरकार र अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छ । औषधालयमा कर्मचारीको अभाव छ ।
उपचारका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाबाट बिरामी आउँछन् । तर, यो औषधालयमा आवश्यक सेवा नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । पर्याप्त औषधि अभावका कारण बिरामी मर्कामा छन् ।
कालीकोट रास्कोट नगरपालिकाका दधि तिरुवाले कर्णाली औषधालयमा उपचार गर्न लागेको ३ वर्ष भयो । ‘मलाई दम छ, छातीमा समस्या छ । यो औषधालयको औषधि खाएपछि सन्चो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कालीकोटबाट आउनुपर्छ डाक्टर सापले औषधि धेरै दिनु हुन्न । एक महिनालाई दिएको औषधि तीन महिना पु¥याएर खान्छु,’ उनले दु:खेसो पोखे ।
सुर्खेत रानीघाटकी राममाया बुढाको पीडा पनि उस्तै छ । उनले पनि आफूले पर्याप्त औषधि नपाएको गुनासो पोखिन् । माग अनुसार औषधि नदिनुमा यो औषधालयको आफ्नै बाध्यता छ । पर्याप्त औषधि उत्पादन नहुँदा र औषधि बनाउने मेसिन पनि बिग्रिदा औषधालयले मागअनुसारको औषधि दिन सकिरहेको छैन् । अहिले अस्पतालमा स्थापनाकालमा ल्याइएका जापानी प्रविधीका ३ वटा मेसिन काम नलाग्ने भएर बिग्र्रिएका छन् । ड्राई मेसिन, स्टीप मेसिन, डिक्स् मिल पाउडर मेसिन अहिले बिग्रिएर थन्किएका छन् ।
औषधालयमा आयुर्वेदिकका विभिन्न औषधिहरु उत्पादन गरेर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा निःशुल्क वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । तर, पाउडर उत्पादन गर्ने मेसिन मात्रै संचालनमा छ । अन्य मेसिनहरु ल्याएको एक महिना बिग्रेका छन् ।
मेसिन बनाउनको लागि जनशक्ति पनि छैन । ‘त्यो बेला मेसिन मात्र पठाइयो । मेसिन बनाउनका लागि प्रवाधिक भएन । पछि भारतबाट टेक्नीसियन आयो तर पेस्की रकम लगेपछि फर्किएन्,’ आयुर्वेद औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले भने ।
औषधालय प्रदेश सरकार मातहत भएपनि अहिलेसम्म कर्मचारीहरुले तलब स्थानीय सरकारबाट खाने गरेका छन् । समय—समयमा औषधालयको नाम फेर्ने काम भएपनि यो पटक भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट थोरै सहयोग छ । ‘पुराना मेसिनमध्ये पाउडर बनाउने मेसिन मात्रै प्रयोगमा आएको छ,’ आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालले भने । अहिले प्रदेश सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक अस्पतालका लागि डि.पि.आर. तयार गरिसकेको उनले बताए । यसबाट कर्णालीका १० जिल्लाले सेवा पाउने र कर्णालीमा पाइने सबै जडिबुटीको कर्णालीमा नै उपभोग गर्ने लक्ष्य रहेको डा. रिजालले दाबी गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विक आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका रुपमा विकास गर्न आफूहरु लागि परेको बताउँछन् । धेरै किसिमका आयुर्वेद औषधि उपत्पादनको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।